China Rubber kupfeka, kudhinda mvura, UV emagetsi padhudhi bvudzi bhurashi ine inoshanduka pamutsago fekitori uye vagadziri | Yongsheng
Rubha kupfeka, kuendesa mvura, UV emagetsi padhudhi bvudzi bhurashi ine inoshanduka pamutsago
Zvinhu: ABS, rubber, nylon,
Paddle brashi ine inoshanduka piro uye nylon pini. Kunyangwe uine bvudzi rakanaka, rakakora, rakamonana, rakanyorova kana rakaoma, Iyo yakapfava Paddle Brush inoshanda nemhando dzese dzebvudzi, zvinyoronyoro kudzikamisa paunenge uchizvikwenya kuburikidza nehurefu hwebvudzi rako. Izvo hazvidhonze kana kudhonza, panzvimbo pacho matenderedzwa akakomberedza anonyorova kukwiza musoro wako. Zvakare inogona kuwana yehunyanzvi salon mhedzisiro kumba kwekutsanya uye kunoshanda dhizaini, yakakwana yekudzikamisa uye kuridza kuomesa kutora bvudzi rako kubva kunyoro kuoma. Inosiya bvudzi rako rakapfava, rakatsetseka uye rakatsetseka. Inoratidzira echinyakare maumbirwo akagadzirirwa kutwasanudza, volumize, kudzikamisa kana dhizaini panguva yekuvhuvhuta kuomesa, ivo vanouya mune maruva anodhinda uye eziso zviwitsi mavara. Isa iwo maratidziro epadhedhi bhurashi nehupamhi hwayo, inochinja cushion base uye bhora rakaputirwa bristles, kuti ushande uye unakirwe nekushushikana kwepachena kukwesha uye kudzikisira. Paddle brushes yakakosha kune bvudzi refu rakatwasuka kana bvudzi rakakora Mhepo yakazadzwa pamushini inoshanda seinchi inokatyamadza yekubata inishuwa kune yako yakaoma musoro. Iwo akaputirwa, akakomberedzwa matipi bristle anobatsira kudzivirira kubatika uye kuputsa uye kuita kusunungura pasina kudhonza.
Iyo padhudhi bvudzi bhurashi nemhando dzakasiyana dzehunyanzvi uye ergonomic isiri-inotsvedza inobata. Aya anobata akagadzirwa zvakanyanya neakawandisa kutonga uye kunyaradza nepo dhizaini. Zviri nyore kuzadzikisa mibairo yesalon kumba nebrashe iri. Unogona kusarudza mhando dzakasiyana dzemabatiro, akareruka akareruka mubato, mubato une dhizaini dhizaini, yakasarudzika chimiro yakagadzirirwa mubato….
Pashure: Nyanzvi yakatenderera bvudzi bhurashi ine yakanyanya tembiricha yekudzivirira mune akasiyana maitiro
Zvadaro: Rubha kupfeka, UV magetsi, kudhindisa kudhindisa, kudhirowa mvura bvudzi bhurasho neIntelliflex bristles
Curve Bvudzi Brush
Yakaomarara Bristle Bvudzi Brashi
Buri Bvudzi Bhurasho
Round Rubber Bvudzi Brush
Triangle Bvudzi Brush
Wood Bvudzi Brashi
Professional dzeraundi bvudzi bhurasho nerefu tempera ...